လွတ်မြောက်မှု အနာဂတ်ကို မျှော်ကြည့်ခြင်း
တိုကျိုမြို့ ရှိ မြန်မာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလမ်းညွှန်
A Gift to My Children (6)
E Journal (1)
ကမ္ဘာတလွှား မြန်မာသတင်းများ (40)
အထွေထွေ ဆောင်းပါးများ (14)
Myanmar Bloggers' List
ဘာသာရေး ဆိုင်ရာ စာမျက်နှာများ
စိုင်းထီးဆိုင် အကောင်းတကာ့အကောင်းဆုံးတေး Sai Htee Saing - Best Of The Be...
Monthly Executive Committee Meeting For September
KO KO ATTRACTION (JAPAN)
၂။ စောင့်ဆိုင်းခြင်း (WAITING FOR THINGS)
ကျွန်ုပ်တို့သည် တစ်ချိန် မဟုတ် တစ်ချိန်၌ ကိစ္စ တစ်ခုခုကို စောင့်ဆိုင်းဖူးကြပေမည်။ ချိန်းဆိုထားသူ တစ်ဦး ရောက်လာမည်ကို လည်းကောင်း၊ ဘတ်စ်ကားတစ်စီး ရောက်အလာကို လည်းကောင်း၊ တယ်လီဖုန်း လာမည်ကို လည်းကောင်း၊ စာတစ်စောင် လာရန်ကို လည်းကောင်း စသည်ဖြင့် ကိစ္စအမျိုးမျိုးကို သင် စောင့်ဆိုင်းဖူးကြ ပေလိမ့်မည်။ ထိုသို့ စောင့်ဆိုင်းရတိုင်း ထိုကိစ္စ ဖြစ်ပေါ်လာရန် အကြာကြီး စောင့်ဆိုင်း ရသည်ဟု ထင်ရတတ်ပေသည်။ "အချိန်များ ကုန်ခဲလိုက်တာ၊ ကြာလိုက်တာ" ဟု ကျွန်ုပ်တို့ ထင်ကြမြဲ ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ထိုင်စောင့် နေသော ရေနွေးအိုးသည် ဆူခဲလှပေသည်ဟု အဆိုရှိခြင်း ရှိပေသည်။
ထိုသို့ စောင့်ဆိုင်းရတိုင်း သင်သည် နောင် ဖြစ်လာမည့် ကိစ္စအတွက် အချိန်ကို အလဟဿ မကုန်စေသင့်ပေ။ ဒီအတိုင်း ဘာမှမလုပ်ဘဲ စောင့်ဆိုင်းနေမည့်အစား အကျိုးရှိမည့် ကိစ္စ တစ်ခုခုကို စိတ်ဝင်တစား ထလုပ်သင့်ပေသည်။
စာအုပ် တစ်အုပ်ကို ယူဖတ်ခြင်း၊ ပစ္စည်းများ သိမ်းဆည်းခြင်း စသည်တို့ဖြင့် အလုပ်တစ်ခုခုကို ပစ္စုပ္ပန်ကာလ၌ ထလုပ်လိုက်ပါက စောင့်ဆိုင်းရသည်ကို ကြာလှသည်ဟု မထင်ရတော့ပေ။ အခြား အလုပ် တစ်ခုလဲ ပြီးမြောက်ကာ သင် စောင့်ဆိုင်း နေရသော ကိစ္စလည်း ဖြစ်ပေါ် ရောက်ရှိ လာပေလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့် ပစ္စုပ္ပန် ကာလ၌ ပျော်ရွှင်စွာ နေထိုင်ပါဟု ဆိုလိုခြင်း ဖြစ်ပေသည်။
Posted by F.E.F.F at 7:06 PM ,0comments
Labels: Articles, ဒေါက်တာအောင်မော်
လက်တွေ့နည်းကျ အောင်မြင်ပျော်ရွှင် ချမ်းမြေ့ စွာ နေထိုင်နည်း ပညာ (၇)
၁။ ပစ္စုပ္ပန်မှာ ပျော်ရွှင်စွာနေပါ (LIVING IN THE NOW)
ကျွန်ုပ်တို့၏ စိတ် ငြိမ်းချမ်းသာယာ ပျော်ရွှင်စွာ နေထိုင်နိုင်မှု နှင့် ထိရောက် အောင်မြင်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်မှုတို့သည် ပစ္စုပ္ပန် အချိန်ကာလကို မည်မျှ အသုံးချတတ်သည် ဟူသော အချက်ပေါ်တွင် မူတည် နေပေသည်။
သင် အမှန်တကယ် ပိုင်ဆိုင်သည့် အချိန်မှာ ပစ္စုပ္ပန်အချိန် ကာလပင် ဖြစ်သည်။ မနေ့က ဘာတွေ ဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့၊ မနက်ဖြန်တွင် ဘာတွေ ဖြစ်လာဖြစ်လာ သင် ယခုပိုင်ဆိုင် လုပ်ကိုင်နိုင်သည်မှာ ပစ္စုပ္ပန်ကာလပင် ဖြစ်သည်။ သင့်အဖို့ ပစ္စုပ္ပန်သည် တကယ် ပိုင်ဆိုင်ရာ ကာလ ဖြစ်သည်။
ပျော်ရွှင်မှုနှင့် အောင်မြင်မှုတို့ ဖြစ်ပေါ် ရရှိရန် အဓိက ကျသော အချက်များကို လေ့လာ ရှာဖွေရာဝယ် ကျွန်ုပ်တို့၏ စိတ်ကို "ပစ္စုပ္ပန် ကာလသည်သာ မိမိ အမှန်တကယ် ပိုင်ဆိုင်သည်" ဆိုသည့် အချက် ကို အခြေခံထား စဉ်းစားရမည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ကလေးများကို ဦးစွာ လေ့လာ ကြည့်ကြ ပါစို့။ ကလေးများသည် ဘာအရာကိုပဲ လုပ်လုပ်၊ ဘာနှင့်ပဲ ကစား ကစား ထိုအချိန် ကာလ၌ လုပ်နေသည့် အရာပေါ်တွင်သာ လုံးဝ ဥဿုံ စိတ်ဝင်စားမှု အပြည့်အ၀ ရှိနေခြင်းကို တွေ့ရှိရပေသည်။ အရုပ်ကလေးများနှင့် ကစားနေသည် ဖြစ်စေ၊ ပုံလေးတစ်ပုံ ဆွဲနေသည်ဖြစ်စေ၊ ကြောင်ကလေး၊ ခွေးကလေးများကို ကြည့်နေသည် ဖြစ်စေ၊ ထိုအချိန်ကာလ၌ (တစ်နည်း) ပစ္စုပ္ပန် ကာလ၌ ပြုလုပ် နေသည့် ကစားခြင်း၊ ပုံဆွဲခြင်း စသည့် အလုပ်တို့၌သာ သူတို့၏ အာရုံကို အပြည့်အ၀ထား စိတ်ဝင်တစား ရှိနေကြပြီး အခြား ဘယ် အရာတွင်မှ အာရုံ မရှိကြပေ။ ဤအရာသည် များစွာ နှစ်လိုဖွယ် ဖြစ်ပြီး ကောင်းမွန်ကာ အတုယူထိုက်လှ ပေသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် အသက်အရွယ် ကြီးလာသည်နှင့် အမျှ တွေးတောစဉ်းစား လာတတ်ကြပြီး ကိစ္စ အ၀၀တို့၌ စိုးရိမ် ပူပန်လာကြ သည်။ အာရုံ များလာကြသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ဖြစ်ပြီးခဲ့သော အတိတ်က ပြဿနာများနှင့် အနာဂတ်တွင် ဖြစ်လာနိုင်သည့် ပြဿနာများကို ခေါင်းထဲတွင် စုပြုံ၍ တစ်ပြိုင်နက် ထည့်ပြီး စဉ်းစား တွေးတော ကြလာတော့သည်။ ဤသို့ဖြင့် မိမိကိုယ်မိမိ စိတ်ဆင်းရဲအောင် ပြုလုပ်နေသလို ဖြစ်နေကြ ပေသည်။ ထိုအခါ ပျော်ရွှင်မှု ကင်းမဲ့လာပြီး မိမိ၏ အစွမ်းအစ များကိုလည်း ထိထိရောက်ရောက် အသုံးမပြုနိုင်ကြတော့ပေ။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ယခု လက်ရှိ ပစ္စုပ္ပန် ကာလတွင် ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် စိတ်ငြိမ်းချမ်း သာယာစွာ နေနိုင်သည့် အခြေအနေ ရှိပါလျက်နှင့် မနေကြဘဲ "နောင် အနာဂတ် တွင် ယခုလက်ရှိ အခြေအဆနေထက် ပိုမို ကောင်းမွန် သာယာမည့် အချိန်ကျမှသာ ပျော်ရွှင်စွာ နေနိုင်လိမ့်မည်" ဟု ကျွန်ုပ်တို့ အများစုသည် လွဲမှားစွာ တွေးမြင် ယူဆ ထားလေ့ ရှိကြသည်။
ဤအချက်ကို ပေါ်လွင်အောင် ဥပမာ တစ်ခု ဆောင်လိုပေသည်။ အထက်တန်း ကျောင်းသား တစ်ယောက်သည် "ငါဟာ ဒီကျောင်းက ဆယ်တန်းအောင်ပြီး ကျောင်းစာ အိမ်စာတွေလဲ မလုပ်ရ၊ ဆရာတွေ ချမှတ်တဲ့ စည်းကမ်းတွေလည်း မလုပ်ရတဲ့ အခါကျယင် ဘယ်လောက် လွတ်လပ်ပြီး ပျော်စရာ ကောင်းမလဲ" ဟု တွေးမိလေသည်။ ဆယ်တန်း အောင်ပြီးသော အခါ ဤသို့တစ်ဖန် တွေးပြန်သည်။ "ငါ့အိမ်မှာ မနေရဘဲ အဆောင်မှာနေပြီး ကောလိပ် တက်ရယင် လွတ်လပ်ပြီး ပျော်စရာ တကယ်ကောင်းမှာပဲ" ဟု တွေးပြန်သည်။ ထို့ကြောင့် သူ့ ဆန္ဒအတိုင်း အဆောင်မှာနေပြီး ကောလိပ် စတက် လေသည်။ သို့သော် သူသည် ထင်သလို မပျော်ပေ။ ထိုအခါ ငါသာ ဘွဲ့ရပြီး စာတွေမကျက်ဘဲ နေရယင်တော့ တကယ့်ကို လွတ်လပ်ပြီး ပျော်စရာ ကောင်းမှာဘဲ ဟု တွေးပြန်သည်။ ဘွဲ့ရပြီးသော အခါ၌မှု အလုပ် တစ်ခုခု ရမှသာ ပျော်စရာ ကောင်းမည်ဟု တွေးပြန်သည်။ အလုပ် ရသော အခါ၌လဲ သူ တကယ် ပျော်ရွှင် ငြိမ်းချမ်းစွာ မနေနိုင်သေးပါ။ မိမိ လက်ရှိ အခြေအနေမှ တက်လမ်းများကို ရှာဖွေ လုပ်ကိုင်ယင်းဖြင့် အလုပ် သံသရာထဲ၌ လည်ပတ်ကာ ပျော်ရွှင်မှုကို မရရှိပါ။ ဤသို့ဖြင့် "မိမိ၏ ငြိမ်းချမ်းသာယာ ပျော်ရွှင်စွာ နေနိုင်မည့် အချိန်သည် နောင်အနာဂတ်တွင် တစ်ချိန်ချိန်၌ ဖြစ်လာပေလိမ့်မည်" ဟု ခံယူ ယင်းဖြင့် နှစ်များ ကြာလာခဲ့သည်။ သို့ဖြင့် သူသည် စေ့စပ်ကြောင်းလမ်း၊ အိမ်ထောင်ကျ၊ နေထိုင်စရာ အိမ်ကိုရှာ၊ ၀င်ငွေကောင်းသည့် အလုပ်တွေရှာပြီး ပြောင်းလုပ်၊ ကလေးတွေမွေး၊ မိသားစုကြီးဖြစ်လာ၊ ကလေးတွေ ကျောင်းထား၊ အိမ်မြေ ပစ္စည်းများ ရအောင် ငွေကြိုးစားရှာဖွေ၊ မိသားစုကြီး တစ်ခုလုံး၏ တာဝန်ကို ထမ်းဆောင်ရ၊ ကလေးတွေကို မူလတန်းမှ တက္ကသိုလ်အထိ ဆက်ထား၊ ဒုက္ခပေါင်းစုံ တွေ့ကြုံရပြီး အသက်ကြီးလာ၊ နောက်ဆုံး အလုပ်မှ ပင်စင်ယူ- စသည်- စသည်ဖြင့် သူ တကယ် ငြိမ်းချမ်းပျော်ရွှင်စွာ နေနိုင်မည့် အချိန်သည် အနာဂတ် တစ်ချိန်ချိန်တွင် ရှိလာလိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်ယင်းဖြင့် ထိုအချိန် မတိုင်မှီ သူ ကွယ်လွန်သွား တော့သည်။
သူသည် နောင်အနာဂတ်တွင် ဘယ်တော့မှ လိုအင်ဆန္ဒ အတိုင်း ပြည့်စုံစွာ ဖြစ်မလာနိုင်သည့် အခြေအနေများကို စဉ်းစား တွေးတော မျှော်လင့်ယင်းဖြင့် သူ၏ အဖိုးတန် လှသော ပစ္စုပ္ပန် အချိန် အားလုံးကို ပျော်ရွှင်မှု မရှိဘဲ အလဟဿ ကုန်ဆုံးစေခဲ့ လေသည်။
သင်ရော အထက်ပါ အဖြစ်မျိုး ဖြစ်နေပါသလား။ မိမိ ကိုယ် မိမိ သုံးသပ်ကြည့်ပါ။
ပစ္စုပ္ပန် အချိန်တွင် မိမိလုပ်သင့် လုပ်ထိုက်သည်များကို လုပ်ပြီး ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ စွာ နေထိုင် လုပ်ကိုင်ပါ။ ပြီးခဲ့သော အတိတ်ကာလက အမှားအယွင်း အပြစ်များကို စဉ်းစားတွေးတော စိတ်မချမ်းသာ ဖြစ်နေ၍ လည်းကောင်း၊ နောင် အနာဂတ်တွင် ဖြစ်ပေါ် လာနိုင်သည့် ပြဿနာများကို တွေးတော ပူပန်နေ၍ လည်းကောင်း ဘာမျှ အကျိုး မရှိ နိုင်ပေ။ ထို့ကြောင့် ထိုကဲ့သို့ အာရုံများပြီး မနေထိုင်ဘဲ ယခုလက်ရှိ ပိုင်ဆိုင် နေသော ပစ္စုပ္ပန် အချိန်တွင်သာ အကောင်းဆုံး၊ အမှန်ကန်ဆုံးနှင့် အကျိုး အရှိဆုံးသော အလုပ်တို့ကို အားသွန်ခွန်စိုက် ကြိုးစား လုပ်ကိုင်ယင်း စိတ်ချမ်းသာစွာဖြင့် ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် နေထိုင်သင့်ပေသည်။
ပစ္စုပ္ပန် အချိန်သည် မိမိ ပိုင်ဆိုင်ပြီး ပျော်ရွှင်စွာ နေပါဟု ဆိုရာ၌ မည်သည့် ရည်ရွယ်ချက် ရှိသည့် အလုပ်ကို လုပ်လုပ် နောက်ဆုံး ရရှိလာမည့် ရလဒ်ကို မျှော်မှန်း တွေးတော စိုးရိမ် ပူပန်၍ မနေဘဲ လက်ရှိ အချိန်၌ လုပ်ကိုင်နေမှု အပေါ်တွင်သာအာရုံ စူးစိုက်၍ ပျော်ရွှင်စွာ လုပ်ကိုင်ပါဟု ဆိုလိုရင်း ဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် သင်သည် အခန်းတစ်ခန်းကို ဆေးသုတ်နေသည် ဆိုပါစို့။ သင်၏ စိတ်ထဲ၌ အခန်းတစ်ခန်းလုံး အချိန်မှီသုတ်လို့ ပြီးပါ့မလား၊ လှလှပပ သပ်သပ်ရပ်ရပ်ကော ဖြစ်ပါ့မလား၊ အချိန်မှီ ခြောက်ပါ့ မလား၊ သုတ်ပြီးသမျှ လှလှပပ ရှိရဲ့ လား စသည်ဖြင့် လုပ်ပြီးသည့် ကိစ္စ၊ နောင်ဖြစ်လာမည့် ကိစ္စတို့ကို တွေးတောပူပန် မနေဘဲ သင် သုတ် နေသော ဆေးစုတ်ချက်တိုင်း၌ စိတ်ကို နှစ်မြုပ်၍ စုတ်ချက်တိုင်း ညီညာ ကောင်းမွန်အောင် ကြိုးစားပြီး ပျော်ရွှင် လွတ်လပ်စွာဖြင့် ဆေးသုတ်ရန်သာ ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအခါ စိုးရိမ်စိတ်ကင်း၍ အာရုံ မများဘဲ စုတ်ချက်တိုင်းကို မှန်မှန်ကန်ကန် ညီညီညာညာ ဖြစ်အောင် သုတ်လာနိုင်ပြီး နောက်ဆုံးတွင် လှပ သပ်ရပ်သော ဆေးသုတ်ပြီး အခန်းတစ်ခုကို သင်ရရှိလာပေလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် တကယ်တမ်း စိတ်ညစ်စရာ၊ ပူပင်သောက ရောက်စရာ၊ စိုးရိမ်ဒုက္ခများနှင့် လက်တွေ့ ကြုံတွေ့ရသော အခါတွင် ထိုပူပင်သောကစိတ်ကို ခေါင်းထဲမှ အလွယ်တကူ ဖျောက်ဖျက် ရန်မှာ မလွယ်ကူပေ။ ဥပမာအားဖြင့် သင်အလုပ်မှ ထုတ်ပစ်ခံရခြင်း၊ စာမေးပွဲ ကျရှုံးခြင်း၊ အိမ်ထောင်ရေး ပြိုကွဲခြင်း အစရှိသည့် ကိစ္စ များနှင့် ကြုံတွေ့လာပါက ထိုပူပင်သောက စိတ်ညစ်စရာများကို ဖျောက်ဖျက်ပစ်ရန်မှာ မလွယ်ကူလှသည်မှာ အမှန်ပင် ဖြစ်သည်။ ထိုအခါ မျိုး၌ သင်သည် တစ်ခုခုကို ထ၍စိတ်ပါဝင်စားစွာ လုပ်ကိုင် လိုက်ပါ။ ဘယ်အရာကိုမဆို ထလုပ်လိုက်ပါ။ မိတ်ဆွေ တစ်ယောက်ထံ ဖုန်းထ ဆက်လိုက်ပါ။ ဒါမှမဟုတ်လျှင် ကလေးများကိုခေါ်၍ ပန်းခြံ တစ်ခုသို့ သွားလိုက်ပါ၊ သို့မဟုတ် ခြံထဲဆင်းပြီး အပင်များကို ရေလောင်းလိုက်ပါ။ ထိုသို့ တစ်ခုခု အပေါ်၌ အာရုံစိုက်ပြီး လုပ်လိုက်မှ သာလျှင် သင်၏ ခေါင်းထဲ၌ ရှိသည့် စိုးရိမ်သောက၊ စိတ်ညစ်စရာများကို ခေါင်းထဲမှ ထုတ်ပစ်နိုင်လ်ိမ့်မည်။
အချိန်နာရီ ဆိုသည်မှာ အမှန်တော့ တကယ် ရှိသည် မဟုတ်။ ကျွန်ုပ်တို့ ခေါင်းထဲ၌ တွေးခေါ် ယူဆ မှတ်သား ထားချက် တစ်ခုသာ ဖြစ်သည်။ ပစ္စုပ္ပန် အချိန်သည်သာ သင် တကယ် ပိုင်ဆိုင်သော အချိန်ကာလ ဖြစ်သည်။ ထိုချိန်ကလေး အတွင်းတွင် သင်သည် အကျိုးရှိမည့် ကိစ္စ တစ်ခုခုကို ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ စွာဖြင့် အာရုံမများဘဲ ယခုပင် စတင် လုပ်ကိုင်သင့် ပေသည်။
Posted by F.E.F.F at 7:01 PM ,0comments
လက်တွေ့နည်းကျ အောင်မြင်ပျော်ရွှင် ချမ်းမြေ့ စွာ နေထိုင်နည်း ပညာ (၆)
၆။ အောင်မြင်ကြီးပွား ချမ်းသာခြင်း (PROSPERITY)
အောင်မြင်ကြီးပွား ချမ်းသာခြင်းကို ကျွန်ုပ်တို့သည် များစွာ အလိုရှိကြပေသည်။ ဘယ်သို့သော အခြေအနေကို ကြီးပွား ချမ်းသာ နေသည်ဟု ဆိုရမည်နည်း။ သတ်မှတ်နိုင်မည်နည်း။
တစ်နေ့လုပ်မှ တစ်နေ့စားရသော ဆင်းရဲသား တစ်ယောက် အဖို့ ကြိုးစားသဖြင့် လခစား အလုပ်တစ်ခု ရရှိပြီး လစဉ် လစာလေး၊ လေးငါရာ မှန်မှန် ရရှိလာသော အခြေအနေသည် ထိုဆင်းရဲသား အဖို့ အောင်မြင်ကြီးပွား ချမ်းသာခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ လက်ထဲ၌ ငွေလေးငါးသောင်းခန့် ရှိပြီး ကိုယ်ပိုင် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတစ်ခု စထောင်ကာ ကြိုးစားလုပ်ကိုင်သူ တစ်ဦးအဖို့ လုပ်ငန်းအောင်မြင်၍ ငွေလေးငါးသိန်းဖြင့် လည်ပတ်နေသည့် လုပ်ငန်းတစ်ခု ဖြစ်လာပါက ထိုသူအဖို့ ကြီးပွားချမ်းသာခြင်းပင် ဖြစ်သည်။
တစ်ဖန် အမွေရ၍ ငွေတစ်သိန်းခန့် ရှိနေသူသည် မိမိကိုယ် မိမိ ချမ်းသာသည်ဟု မယူဆဘဲ တိုက်နှင့် ကားနှင့်၊ တီဗွီ၊ ဗွီဒီယို နှင့်၊ရွှေနှင့်၊စိန်နှင့် နေရပြီး ငွေဆယ်သိန်းခန့် ရှိမှသာ သူ့အနေဖြင့် ချမ်းသာသည်ဟု ယူဆရပေမည်။ ထို့အတူ ဆယ်သိန်း ချမ်းသာ သူက သိန်းတစ်ရာ ရှိလာမှ ချမ်းသာသည်ဟု ယူဆပေမည်။ သိန်းတစ်ရာ ချမ်းသာသူကလဲ သိန်းတစ်ထောင် ရှိလာမှ ချမ်းသာသည်ဟု ယူဆပေလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့ အားလုံးသည် ကြီးပွားချမ်းသာ လိုကြသည်မှာ မှန်သော်လဲ "ကြီးပွားချမ်းသာသည်" ဆိုသည့် အခြေအနေမှာမူ လူတစ်ဦးစီ၏ ခံယူချက်ပေါ်၌ မူတည်လျက် ရှိနေပေသည်။ ဤနေရာတွင် ချမ်းသာသည် ဆိုရာ၌ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ချမ်းသာ ကြွယ်ဝမှုကိုသာ ပြောဆိုကြပေသည်။ ချမ်းသာသည်ဟု ဆိုလိုက်သည်နှင့် ပိုက်ဆံ ခေါ် ငွေကြေး များစွာ ရရှိပိုင်ဆိုင်မှုသည် အဓိက အခန်းမှ ပါဝင် လာပေသည်။
ငွေကြေးချမ်းသာသည်၊ ဆင်းရဲသည် ဆိုရာ၌ သင်၏စိတ်ပေါ်၌သာ မူတည်နေပြီး သင့်ကိုယ်သင် ချမ်းသာသည်ဟု လည်းကောင်း၊ ဆင်းရဲသည်ဟုလည်းကောင်း ခံယူသတ်မှတ်နိုင်ပေသည်။
"ဒီအခြေအနေ၊ ဒီငွေကြေးတို့သည် မိမိအဖို့ ချမ်းသာ နေသည်" ဟု သင်ခံယူလျှင် သင်သည် ချမ်းသာသူတစ်ဦး ဖြစ်နေပေမည်။ ဆင်းရဲနေသည်ဟု ခံယူနေလျှင်မူ သင်သည်ဆင်းရဲ နေသူတစ်ဦး ဖြစ်နေပေမည်။ ထို့ကြောင့် သင်၏ စိတ်ထဲ၌ ခံယူထားသော အချက်သည် သင့်ကိုယ်သင် ချမ်းသာနေသည်၊ ဆင်းရဲနေသည် ဟူသော အချက်ကို ပြဋ္ဌာန်းလျက် ရှိပေသည်။ တင်းတိမ် ရောင့်ရဲနိုင်သူ အဖို့ သူ၏ စိတ်၌ လက်ရှိအခြေအနေကို ချမ်းသာနေသည်ဟု ခံယူနေပေလိမ့်မည်။
အချုပ်ဆိုရသော် ကြီးပွား အောင်မြင် ချမ်းသာသည် ဆိုသည့် အချက်မှာ သင်၏စိတ်ထဲ၌ ခံယူထားချက် ပေါ်တွင်သာ မူတည်လျက် ရှိပေသည်။ ဤနေရာတွင် ကျွန်ုပ် သိကျွမ်းဖူးသူ တစ်ဦး အကြောင်းကို ဥပမာ ဆောင်လိုပေသည်။ သူသည် ငွေ အမြဲ လိုနေတတ်သည့် လူလတ်တန်းစား မိဘများမှ ပေါက်ဖွားလာသူ တစ်ဦး ဖြစ်သည်။ ငယ်စဉ်ကတည်းက "ငွေဆိုတာ ရှာလိုက်၊ ကုန်လိုက်၊ လိုအပ်လာလိုက် နှင့် ချမ်းသာလာရန် ဆိုသည်မှာ ဝေးစွ၊ ငွေမလိုလျှင်ဘဲ တော်လှပေ သည်" ဟူသော ခံယူချက်သည် သူ၏ စိတ်ထဲ၌ စွဲမြဲနေသည်။
ကြီးလာသောအခါ သူသည် လစာ အသင့်အတင့် ရသော အလုပ်တစ်ခုတွင် ၀င်ရောက် လုပ်ကိုင်၏။ ထိုအလုပ်၏ လစာငွေမှာ သူ့အဖို့ မလောက်တစ်လှည့်၊ လောက်တစ်လှည့်ပင် ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း သူသည် ထိုအလုပ်၌ပင် ကျေနပ်နေသည်။ သူ့လိုပင် ငွေအမြဲ လိုနေတတ်သည့် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် များနှင့်သာ ပေါင်းသင်း၏။ ထိုမိတ်ဆွေများကလဲ "ဘ၀ ဆိုတာ ဒီလိုပါပဲ၊ ငွေဆိုတာ အမြဲ လိုနေတတ်တာပဲ" ဆိုသည့် အချက်ကို သူ့အား ပိုမိုခံယူ လာစေသည်။
တစ်ခါတစ်ရံ အကယ်၍ သူ့၌ ငွေပိုငွေလျှံလေး ရှိလာပါ ကလည်း သူသည် မနေတတ်ဘဲ အပြင်ထွက်ပြီး တစ်ခုခု၌ အသုံးပြု လိုက်လေ့ ရှိသည်။ စုဆောင်းရန် စိတ်မကူးပေ။ သူ၏ မသိစိတ်၌ ဤသို့တွေးတော ခံယူနေမိသည်-
"ငါ့မှာ ငွေပိုငွေလျှံလေး ရှိနေတာ ထူးဆန်းလိုက်တာ၊ ငါ တစ်ခုခုမှာ သုံးပစ်လိုက်မှပဲ။ ဒါမှ ငါအမြဲတမ်း နေခဲ့သလို၊ အမြဲတမ်း ငွေလိုနေပေလိမ့်မယ်။ ဒါဟာ ငါ့ရဲ့  ပုံမှန်ဘ၀ပဲ" ဟု မသိစိတ်၌ ခံယူနေမိလေသည်။ ငွေကြေး မပြေလည်မှု ဆိုတာ ဘ၀ရဲ့  မလွှဲ မရှောင်နိုင်တဲ့ အရာတစ်ခုဟု ယူဆထားသည်။ ထိုအခါ သူ့အဖို့ အထက်ပါ လခစား အလုပ်ကလေး တစ်ခုနှင့်သာ တင်းတိမ် ရောင့်ရဲပြီး ချမ်းသာ နေသည်ဟု ခံယူနေပေသည်။
ကျွန်ုပ် တွေ့ကြုံခဲ့ဖူးသူ အချို့ က "မိမိသည် ပညာကို ကောင်းမွန်စွာ မသင်ခဲ့ရ၊ မတတ်မြောက်ခဲ့ရ၍ ဆင်းရဲ နေရသည်" ဟု ဆိုလေ့ရှိကြသည်။ ပညာတတ်ခြင်းသည်သာ ချမ်းသာရမည့် အကြောင်းရင်းဟု ဆိုပါလျှင် တက္ကသိုလ်မှ ပါမောက္ခ အားလုံးသည် သန်းကြွယ် သူဋ္ဌေး ဖြစ်နေကြပေမည်။
ပညာကို တစ်ဖက်ကမ်း ရောက်အောင် တတ်မြောက်၍ ဘွဲ့များစွာ ရရှိထားပြီး ဆင်းရဲနေသူများ ရှိသလို စာပေပညာ ကောင်းစွာ မတတ်မြောက်ခဲ့ဘဲ ကြီးပွားချမ်းသာ နေသူများလည်း ရှိနေကြောင်း သင်တွေ့ရှိဖူးပေမည်။
အချို့ က "ငါ အချိန် ကောင်းကောင်း မရခဲ့လို့သာပေါ့ကွာ၊ မဟုတ်ယင် ငါ ကြီးပွား ချမ်းသာနေပြီ" ဟု ဆိုတတ်ကြ ပြန်သေးသည်။ လူတိုင်းသည် တစ်ရက် တွင် ၂၄နာရီသာ အညီအမျှ အချိန်ရကြသူချည်းပင် ဖြစ်သည်။ မည်သူမျှ တစ်နာရီ တစ်မိနစ် ပို၍လည်း မရရှိ၊ လို၍လည်း မရရှိ ကြပေ။
တစ်ဖန် ကျွန်ုပ်တို့သည် အချိန်အကြာကြီး ကြိုးစား၍ အလုပ် လုပ်သော်လည်း ဆင်းရဲနေလျက်ပင် ရှိသော သူများကို တွေ့နိုင်သလို၊ သင့်တင့်သော အချိန်တို အတွင်း၌ပင် အလုပ် လုပ်ပြီး ချမ်းသာကြွယ်ဝ လာသူများကိုလည်း တွေ့နိုင်ပေသည်၊ အလုပ် ကြိုးစား လုပ်ကိုင်မှု သည် မရှိမဖြစ် အရေးကြီးသော်လဲ ထိုကဲ့သို့ လုပ်ကိုင်တိုင်း အမြဲတမ်း ကြီးပွားချမ်းသာ လာနိုင်မည်ဟု မပြော နိုင်ချေ။ ထို့ကြောင့် အချိန် အခါကို လိုက်၍ တွေးဆ ဆင်ခြင်ပြီး အကြံဥာဏ်ကောင်း ထုတ်ကာ မိမိ၏ လုပ်ကိုင်နည်းများကို ပြောင်းလဲသင့်က ပြောင်းလဲ လုပ်ကိုင် တတ်ရန်လည်း လိုအပ်ပေသည်။
အထက်တွင် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း သင်သည် တင်းတိမ် ရောင့်ရဲနိုင်သူ တစ်ဦး ဖြစ်ပါက သင်၏ လက်ရှိအခြေအနေတွင်ပင် ကျေနပ် ၀မ်းမြောက်ပြီး ချမ်းသာ နေပေလိမ့်မည်။ သို့သော် သင်သည် အမှန်တကယ် ကြီးပွား တိုးတက်ပြီး အောင်မြင် ချမ်းသာ လိုပါလျှင်မှု သင်၏ လက်ရှိခံယူချက်များကို ပြုပြင်သင့်က ပြုပြင်ရပေမည်။ ယခု အခြေအနေထက် တိုးတက် ချမ်းသာ လာရမည် ဟူသော ရည်မှန်းချက်ကို ရောက်အောင် တွေးတော ကြံဆ ကြံစည် ကြိုးစား လုပ်ကိုင်ရပေမည်။
သင် အမှန်တကယ် ကြီးပွားတိုးတက်ပြီး အောင်မြင်ချမ်းသာ လိုပါက လုပ်ဆောင်ရန် အချက်များကို အောက်တွင် ဖော်ပြထား ပါသည်။
၁။ ငါ မဖြစ်မနေ တိုးတက် ကြီးပွား ချမ်းသာ လာရမည်ဟု သင်၏ စိတ်ထဲ၌ ခိုင်ခိုင်မာမာ ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါ။ ထို့နောက် ကောင်းသော ခံယူချက် ယုံကြည်ချက် အပြည့်အ၀၊ ဇွဲ လုံ့လ အပြည့်အ၀တို့ဖြင့် အားစိုက် လုပ်ကိုင်ပါ။
၂။ ရရှိလာသော ငွေကို ဦးစွာ စုဆောင်းပါ၊ ပိုသော ငွေကိုမှ သုံးစွဲပါ။ ကြီးပွားချမ်းသာ လာရန်မှာ သေချာ ကြံစည်၍ ရည်မှန်းချက်ကို ရောက်အောင် အကွက်ချ လုပ်ကိုင်တတ်ရန် များစွာ အရေးကြီးပြီး၊ ကြံစည်ထားသည့်အတိုင်း အတိအကျ လိုက်နာ လုပ်ကိုင်ရန် လိုပေသည်။ ဆင်းရဲနေသူများမှာ ရရှိလာသောငွေကို အရင်သုံးပြီး ပိုမှစုမည် ဆိုသည့် သူများ ဖြစ်ကြပေသည်။
၃။ ကြီးပွားချမ်းသာ နေသူများ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များအား လေ့လာပါ။ မိမိနှင့် သူတို့အကြား ကွာခြားချက်များကို ရှာဖွေ နှိုင်းယှဉ် ကြည့်ပါ။ ကောင်းမွန်သော အချက်၊ အပြုအမူ၊ လုပ်ကိုင်မှုများကို မှတ်သား အတုယူပါ။ ထိုသူတို့၏ အရည်အချင်းနှင့် လုပ်ကိုင်နည်း စနစ်တို့ကို လေ့လာ သင်ယူပါ။ သူတို့၏ ခံယူချက်များ ကိုလည်း လေ့လာ ကြည့်ရှု နှိုင်းယှဉ်ပြီး မိမိ၏ မကောင်းသည့် ခံယူချက်များကို စွန့်ပယ်ပစ်ပါ။
၄။ အကူအညီ တောင်းခံပါ။ သင်ကသာ တကယ် လိုအပ်သော၊ အကျိုးရှိမည် ဖြစ်သော အကူအညီကို တောင်းခံပါက သင့် အား ကူညီချင်ကြသည့် မိတ်ဆွေများ၊ များစွာ ရှိလှကြောင်း သင် အံ့သြလောက်အောင်ပင် တွေ့ရှိရပေလိမ့်မည်။
၅။ အစဉ်သဖြင့် သင့်ကိုယ်သင် "ငါသည် ချမ်းသာ ကြွယ်ဝ လာရမည်" ဟု မိမိကိုယ်မိမိ ယုံကြည်လာအောင် ပြုလုပ်ပါ။
၆။ တစ်ခါတစ်ရံ မိမိ၏ငွေကို တန်ဖိုးရှိသော ကိစ္စများ၌ သုံးစွဲပါ။ သို့မှသာ သင်သည် သင် ပိုင်ဆိုင်သော ငွေကို သင် တန်ဖိုးရှိစွာ လွတ်လွတ်လပ်လပ် အသုံးချနိုင်ကြောင်း သိရှိ ခံစားလာပြီး နောက်ထပ်ငွေများ ပိုမို ကြိုးစား ရှာဖွေလိုစိတ် ပေါ်ပေါက် လာပေမည်။
၇။ ရှေ့ ဆက်လုပ်သင့်သည့် ကြီးပွား တိုးတက်ရန် အစီအစဉ်များ ကို တွေးတောကြံဆပြီး ကောင်းမွန်သော ရည်မှန်းချက်များကို ချမှတ်ထားပါ။
၈။ စာကောင်း ပေကောင်းများကို ရှာဖွေ လေ့လာ ဖတ်ရှုပါ။ စာကောင်း ပေကောင်း တစ်အုပ်မှ အဖိုးတန် အကြံဥာဏ်ကောင်း တစ်ခု သင်ရရှိလိုက်ပါက အချိန်နှင့် ငွေကုန်ရကျိုး နပ်လှပေမည်။
၉။ အမြဲတမ်း သင်နှင့်အတူ ငွေအချို့  အိတ်ထဲတွင် ရှိနေပါစေ။ သို့မှသာ သင်သည် "ငါချမ်းသာသူ တစ်ယောက်" ဟုလည်းကောင်း၊ "ငါ့မှာ ငါကိုယ်ပိုင် လွတ်လပ်စွာ အချိန်မရွေး သုံးစွဲနိုင်တဲ့ငွေ ရှိနေတာပဲ" ဟု လည်းကောင်း ယုံကြည်မှု ရှိလာပြီး မိမိချမ်းသာမှုများ ပျက်ဆီးဆုံးရှုံးမည်ကို စိုးရိမ် ပူပန် နေခြင်းများ ပပျောက်သွားလိမ့်မည်။
၁၀။ သင်သည် မည်သည့် အလုပ်ကို မဆို သင်၏ ကိုယ်ပိုင် ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့် မှန်မှန်ကန်ကန် ပြုလုပ်ပါ။ မှားယွင်း ဆုံးရှုံး မှုများ ရှိပါကလည်း အားမလျော့ပါနှင့်။ သင်၏ မိဘများအား လည်းကောင်း၊ ရာသီဥတုအား လည်းကောင်း၊ အစိုးရကို လည်းကောင်း၊ သင့်အလုပ်ကို လည်းကောင်း၊ သင်၏ ပညာရေးကို လည်းကောင်း စသည်ဖြင့် မည်သည့် အပေါ်တွင်မှ အပြစ် မတင်ပါနှင့်။ မည်သူမပြု၊ မိမိမှုဟုသာ ခံယူထားပါ။
၁၁။ အခက်အခဲ အတားအဆီးများ ရှိပါကလဲ မိမိက မှန်မှန်ကန်ကန်၊ ဇွဲလုံ့လ အပြည့်ဖြင့် တွန်းလှန် ကျော်လွှားပါ။
၁၂။ ကြွယ်ဝချမ်းသာ တိုးတက် အောင်မြင်ရေး အတွက် အခြေခံ ကျသော အချက်ကြီး လေးချက်ကို သင် အမြဲတမ်း မှတ်သား ထားပါ။
(၁) မိမိ ဘာလိုချင်သည် ဆိုသည့် အချက်ကို သိရန် ဦးစွာ စဉ်းစားပါ။
(၂) မိမိ လိုချင်တာ ရရှိနေသည့် အခြေအနေ ပုံပန်းရုပ်ပုံလွှာ ကို မိမိ စိတ်ထဲမှာ ဖန်ဆင်းကြည့်ပါ။ မြင်ယောင် ကြည့်ပါ။
(၃) မိမိ လိုချင်တာ ရရှိစေနိုင်မည့် အစီအစဉ်များ ရေးဆွဲပါ။
(၄) ရေးဆွဲထားသည့် အစီအစဉ်များအတိုင်း မိမိ ရည်မှန်းထားသော ပန်းတိုင်သို့ ပိုမို နီးကပ် ရောက်ရှိအောင် နေ့စဉ် အလုပ်ကို လုပ်ဆောင်ပေးပါ။
Posted by F.E.F.F at 6:53 PM ,0comments
မိတ်ဆွေများမှ သတင်းနှင့် ဆောင်းပါးများပေးပို့လိုပါလျှင် tabataprince@gmail.com သို့ ဆက်သွယ်ပေးပို့ နိုင်ကြောင်း လေးစားစွာ အသိပေးအပ်ပါသည်။
တင်ထားပြီးသမျှ ပို့ စ်များ
လက်တွေ့နည်းကျ အောင်မြင်ပျော်ရွှင် ချမ်းမြေ့ စွာ နေထ...
သဘေ့ောဘိုးရှာထဲသို့ စဈကောငျစီတပျ ဗုံးကွဲခမြှုကွောငျ့ ရှာသား ၂ ဦးသဆေုံးပွီး ၃ ဒဏျရာရ
ကာယ ဥာဏ အလုပ်သမားများ အဖွဲ.
ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများအတွက်အခွင့်ရေးကွန်ယက် Migrant Worker Rights Network (M.W.R.N.)
832 နှစ် မှ တစ်ခါသာကြုံရတဲ့ မြန်မာပြက္ခဒိန်
ORG ၀က်ဘ်ဆိုဒ် ပြန်လည် ကောင်းမွန်
၅-၃-၂၀၁၀ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားပြုကော်မတီ အစည်းအဝေးကျင်းပ
NCGUB ညွန့်ပေါင်းသတင်လွှာ ၅၆
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ ၏ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲ (၁ဝ)နှစ်မြောက် အထိမ်းအမှတ် စာအုပ်
© copyright 2011 by F.E.F.F
Managed By The Bliss Foundation (Tokyo, Japan)
(၀၁-၁၂-၂၀၀၉) တွင် စတင်သည်။